P.K. (M-Media ရုပ်ရှင်အညွှန်း) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« #‎FreeSpeech‬, but we won’t cover your Skin or honor your God
မဘသတွေ ကျူးလွန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကို စော်ကားမှူကြီး »
P.K. (M-Media ရုပ်ရှင်အညွှန်း)
P.K (M-Media ရုပ်ရှင်အညွှန်း)
ဇန်နဝါရီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၄
အမ်မီဒီယာ ပရိသတ်ကြီး ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်မှာ အပျင်းဖြေကြည့်ရှုဖို့ အတွက် ရုပ်ရှင် တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘောလီဝုဒ်မင်းသား အမီးရ်ခန်းကတော့3Idiots ဇာတ်ကားကြောင့် မြန်မာ ပရိသတ်နဲ့မစိမ်းလှသူဖြစ်တာကြောင့် သူနဲ့အတူ မင်းသမီးချော အနွရ်ှကာရှရ်မာ (Anushka Sharma) တို့ ပါဝင်တဲ့ ပီကေ (PK) ဇာတ်ကားကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ နံပါတ် ၆၅ နေရာလိုက်ပြီး အိန္ဒိယမှာတော့ ခေတ်အဆက်အဆက် အတွက် ၀င်ငွေစံချိန်ချိုးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
3 idiots ကို အသက်သွင်းခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ရခ်ျကူမား ဟီရာနီ (Rajkumar Hirani) ရဲ့ ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာ အကြောက်တရား လွှမ်းမိုးခံရတတ်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ လမ်းမှားလိုက်တတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ သဘာဝကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကလေး ကြည့်ရှု နိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
အမီးရ်ခန်းကတော့ ကမ္ဘာကို လေ့လာရေးထွက်လာတဲ့ ဂြိုလ်သားတစ်ဦး၊ သူ့အတွက်တော့ ကမ္ဘာပေါ်က အရာအားလုံးဟာ အံ့သြစရာတွေချည့် ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ သူတို့ ဂြိုလ်ပေါ်က ဂြိုလ်သားတွေက ဘာသာစကားပြောဆိုကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စိတ်နဲ့သာ ဆက်သွယ်ကြတာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မုသားပြောဖို့မဆိုနဲ့ နောက်ပြောင် ကျီစယ် တာမျိုးတောင် မရှိကြဖူးပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်များလှတဲ့ ကမ္ဘာသားတွေအကြား ပထမဆုံးရောက်လာခဲ့တဲ့ အမီးရ်ခန်း ခမြာ လည်ပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ သူ့ရဲ့ဂြိုလ်ကို ဆက်သွယ်နုိုင်မယ့် ကိရိယာ အလုခံခဲ့ရတာပေါ့။
ရီမုတ်ရှာပုံတော် ဖွင့်တဲ့ အမီးရ်ခန်တစ်ယောက် လူတွေကြားထဲ ကျင်လည်ကျက်စား နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ အမေးအမြန်းထူတဲ့ လူ့ဂွစာတစ်ယောက်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ရီမုတ်လုယူသွားသူ ဘယ်သူလဲဆိုတာ၊ ဘယ်နေရာမှ အလုခံရတယ်ဆိုတာတွေ မပြောနိုင်တော့ လူတွေက သူ့ရဲ့ ပြဿနာကို ဘုရားကသာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပေါ့လို့ ပြောပြကြတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ဂေါ့ဒ်ဆိုတဲ့ ဘုရားကို ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားရာကနေ ဟိန္ဒူ ၊ဗုဒ္ဓ ၊ ခရစ်ယာန် ၊ အစ္စလာမ် ဆိုတဲ့ ဘာသာကြီးတွေရဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေကို ရောက်ခဲ့သလို ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား လက်က ကားယားကားယား ဖြစ်နေတဲ့ ဒယူပလီကိတ် ဘုရားခေါ် ဘုရားကိုယ်စား ဘုရားနေရာယူထားကြသူတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ဘုရားလူကြီးတွေကို အမေးအမြန်း ထူတတ်တဲ့အကျင့် ၊ ထုးံတမ်းစဉ်လာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အကျင့် စတာတွေကြောင့် သူ့ကို အရက်သောက်ပြီး မူးများနေရော့သလားရယ်လို့ လူတွေက ပီကေ (အရက်သမား) ဆိုတဲ့ နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။
လူသားတိုင်း မွေးဖွားလာရာမှာ ဘယ်ဘာသာဝင်ရယ်လို့ တံဆိပ်နှိပ်ခတ်ထားခြင်း မျိုး မရှိတာကြောင့် ဘုရားနဲ့ လူအကြား ကြားခံနေတဲ့ ဒယူပလီကိတ် ဘုရားလူကြီးတွေကို ပီကေက စူးစမ်းခဲ့ပြီး တကယ်တမ်းတော့ အဲဒီဘုရားလူကြီးတွေဟာ wrong number ခေါ် နံပါတ်အမှားကြီးနှိပ်ပြီး ဘုရားကို ဆက်သွယ်နေသူတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာတိုင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေ ကွဲလွဲမှု ၊ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကြား ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ တွေရှိနေမှု ၊ ဘုရားလူကြီးတွေကို တကယ့် ဘုရားတစ်ဆူ ဂူတစ်လုံးအသွင် နဲ့အယုံကြီး ယုံကြည်မှု စတာတွေကတော့ ပီကေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လူတွေအကြောင်းပါပဲ။
ဘယ်သာသာဝင်ပါဆိုတဲ့ တံဆိပ်များပါမလာဘဲနှင့် လူအများက ဘာလို့ကွဲလွဲကြလည်း ဆိုတာက ပီကေသိချင်လှတဲ့ အမေးပုစ္ဆာပါပဲ?
ရည်းစားသည်ရဲ့စွန့်ပစ်မှုကို ခံခဲ့ရတယ်လို့ အထင်အမြင်လွဲနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပီကေကို ယုံကြည်မှုထားခဲ့ပြီး သူရဲ့ရီမုတ် ရှာပုံတော်ကုို အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။
ပီကေနဲ့ မိန်းကလေးတို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့မှားယွင်းမှု ၊ အစွန်းရောက်မှုနဲ့ လီဆယ်လုပ်ကြံတတ်မှုစတာတွေကို ဟာသရောပြီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်တွေ့ခံစား နိုင်ပါတယ်။ ယုံမှားသံသယ တစ်ခုကြောင့် သူကို ထားသွားရလေခြင်း ဆိုတဲ့ အမြင်ရှိနေတဲ့ မင်းသမီးချော မိန်းကလေးရဲ့အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကို ဖော်ပြထားသလို မိမိကိုယ် လိမ်လည်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကြောင့် လူလိမ်ရဲ့ ကိုးကွယ်မှုကုို လိုက်ပြီး အဲဒီဘာသာ ကိုးကွယ်သူတိုင်း ဒီလုိုပါပဲလားဆိုတဲ့ stereotype လုပ်တာမျိုး မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက် ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း သင်ခန်းစာ ပေးထားပါတယ်။
ပီကေရဲ့ရီမုတ်ရှာပုံတော် စွန့်စားခန်းကတော့ ရယ်စရာပျော်စရာတွေနဲ့အတူ ဘာသာတရား များအကြား ခက်ထန် တင်းမာနေမှုတွေ၊ တံဆိပ်ကပ် အမြတ်ထုတ်မှုတွေ၊ ယုံကြည်မှကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ် တဲ့ ဘုရားလူကြီးတွေ စတဲ့စတဲ့ အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာကို နာရီပေါင်း ၂ နာရီကျော်အတွင်းမှာ ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ရိုက်ပြတင်ဆက်ထားတာပါ။
ကမ္ဘာလောက ကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့ ပီကေတစ်ယောက် ကမ္ဘာ့လူသားတွေ ဆီကနေ သင်ယူလေ့လာသွားတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကတစ်မျိုး ပြင်ပလက်တွေ့အပြောကတော့ တစ်မျိုး ဆိုတဲ့ မုသားလီဆယ်မှု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို နောက်ဆုံးရိုက်ပြထားတဲ့ ပီကေ ဇာတ်ကားကတော့ အမ်မီဒီယာ ပရိသတ်ကြီး မဖြစ်မနေကြည့်ရှုထိုက်တဲ့ ဇတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ ဖောက်သည်ချတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
This entry was posted on January 14, 2015 at 6:47 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.